किन हार नमान्ने?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
एक्काइस वर्षीया निशा * हेर्दा बुद्धिमान्‌, तुरुन्तै अरूसित घुलमिल हुने र हँसिलो देखिन्छिन्‌। तर भित्र-भित्रै तिनी खोक्रो महसुस गर्छिन्‌। कहिलेकाहीं त तिनी महिनौंसम्म निराश रहन्छिन्‌। तिनी यसो भन्छिन्‌: “मैले मर्ने विषयमा नसोचेको एकदिन पनि छैन। यो संसारमा म हुनुको कुनै अर्थ छैन जस्तो लाग्छ।”
“प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा देशभर ३९७४ जनाले आत्महत्या गरेका छन्‌। यो तथ्यांकले एकदिनमा ११ जना नेपालीले आत्महत्या गर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्‌।”—नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, नेपाल।
आफूले कहिल्यै आत्महत्या नगर्ने कुरा निशा बताउँछिन्‌। तैपनि तिनलाई समय-समयमा जिउनु बेकार छ जस्तो लाग्छ। तिनी भन्छिन्‌: “म दुर्घटनामा परेर मर्न चाहन्छु। मृत्यु मेरो शत्रु होइन, साथी भएको छ।”
निशाले जस्तै महसुस गर्ने मानिसहरू धेरै छन्‌। कसै-कसैले आत्महत्या गर्ने प्रयास समेत गरेका छन्‌। तर विशेषज्ञहरूका अनुसार आत्महत्या गर्न प्रयास गर्नेहरू वास्तवमा आफ्नो जीवनको अन्त गर्न चाहँदैनन्‌। तिनीहरू केवल आफ्नो पीडाको अन्त गर्न चाहन्छन्‌। स्पष्ट भन्नुपर्दा तिनीहरू आफूसित मर्ने कारण छ भनी सोच्ने गर्छन्‌। तर तिनीहरूलाई जिउने कारण चाहिएको छ।
त्यसोभए आउनुहोस्, जिउने तीन कारणबारे विचार गरौं।
मिथ्या: आत्महत्याबारे कुरा गर्नु वा आत्महत्याको नामसमेत लिनु हुँदैन—यसले आत्महत्या गर्न उक्साउँछ।
तथ्य: आत्महत्याबारे खुलस्त कुराकानी गर्दा आत्महत्या गर्ने सोचाइ राखेकाहरूले समस्या समाधान गर्ने अरू उपायबारे विचार गर्न मदत पाउँछन्‌।
^ अनु.3नाम परिवर्तन गरिएको छ।
समस्या समाधान नहुने खालको छ भने पनि तपाईंले गर्न सक्ने एउटा कुरा छ।